Dad Tiro Badan Oo Xaflad Ay Ku Taageerayaan Masuul Ka Tirsan Dawladda Federaalka Soomaaliya Ku Qabtay Laascaanood Iyo Mooganaanta Xukuumadda Somaliland – somalilandtoday.com
Dad Tiro Badan Oo Xaflad Ay Ku Taageerayaan Masuul Ka Tirsan Dawladda Federaalka Soomaaliya Ku Qabtay Laascaanood Iyo Mooganaanta Xukuumadda Somaliland
(SLT-Hargeysa)-Magaalada Laascaanood ee Xarunta Gobolka Sool ee Somaliland, ayaa waxa lagu qabtay Munaasibad lagu taageerayo Wasiirka cusub ee Wasaaradda Kalluumaysiga ee Dawladda Federaalka Soomaaliya Cabdillaahi Bidhaan Warsame isla-markaana lagu sagootiyey Wasiirkii hore ee Wasaaraddaasi.
Munaasibaddan taageerada ah oo aan la ogeyn in Maamulka Gobolka Sool ogyahay iyo in kale, ayaa waxa ka qayb-galay Dadweyne tiro badan, kuwaasi oo iskugu jiray Madax-dhaqameed, Waayeel, Haween, ururrada Bulshada Rayidka ah qaarkood iyo dhallinyaro.
Xafladdan oo ay qabteen Dad ay isku beel ka soo jeedaan Wasiirka Kalluumaysiga ee Soomaaliya, ayaa waxa laga soo jeediyey Hadallo duco iyo dardaaran u ah Wasiirka Kalluumaysiga Soomaaliya Cabdillaahi Bidhaan Warsame, sida ay baahiyeen Telefiishannada halkaa ka hawl-gal oo Wargeyska Himilo ka soo xigtay Warkan.
Qaar ka mid ah Dadweynaha Xafladda ka qayb-galay oo khudbado halkaa ka jeediyey ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa “Waxaanu sagootinaynaa Wasiirkii hore ee Kalluumeysiga, waxaanu soo dhaweynaynaa Wasiirka cusub ee loo Magacaabay Wasaaradda Kalluumaysiga Cabdillaahi Bidhaan Warsame.” Ayuu yidhi, mid ka mid ah Waayeelka reer Laascaanood ee Xafladdaa ka hadlay, waxaanu intaa ku daray “Waxaanu u taageeraynaa Wasiirka cusub waa Dawladdeennii.”
Mid kale oo ka mid ah Waayeelka Laascaanood ee halkaa ka hadlay ayaa yidhi “Xafladda aanu ku qabanay Hoolka Shirarka ee Magaalada Laascaanood, waxaanu ku taageeraynaa Wasiirradayada qaarna soo shaqeeyay qaarna hadda Xilalka loo Magacaabay, kuwaasi oo aanu taageerayno oo aanu la shaqaynayno, Waayo? 18-ka Gobol ee Soomaaliya ka kooban tahay Wasiirrada laga Magacaabo Gobollada SSC waa kuwa ugu mudan.”
Hoolka Xafladdan lidka ku ah Jamhuuriyadda Somaliland ka dhacday ayaa waxa sudhnaa Boodh ay ku sawiran yihiin Wasiirrada midna la soo dhaweynayey, midna la sagootinayey iyo Madaxweynaha Dawladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo weliba Calanka Bulluugga ah ee Soomaaliya.
Maamulka Gobolka Sool oo Wargeyska Himilo isku dayey inuu wax ka weydiiyo inay ka war-qabeen qabashada Xafladdaasi iyo sababta ay tallaabo uga qaadi waayeen Cidda soo qaban-qaabisay, ayaanay noo suurto-gelin inaanu helno.
Xafladdan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu dhawaan Madaxweynaha Somaliland xilka ka qaaday Badhasaabkii hore ee Gobolka Saaxil Cabdi Khayre Dirir isla-markaana uu Gobolkaa u Magacaabay Badhasaab cusub.
Badhasaabkii hore ayaa sannad ka hor wuxuu Magaalada Laascaanood ku xidh-xidhay koox Kubadda Cagta ah oo halkaa ku qabtay tartan kubadeed loogu Magac-daray Farmaajo iyo Weriyeyaashii baahiyey tartankaa Gebogabadiisii.